BAAKISTANIGII AFDUUBKA LOOGU HAYSTAY BOOSAASO DULEEDKEEDA OO LA SII DAAYAY | Toggaherer's Weblog
MARAYKANKA OO LAGU EEDEEYAY DUQAYNTII GAZA
Boosaaso 23 Feb 2009 ToggaHerer
Waxaa goor dhoweyd la sii daayey nin ajnabi ah oo afduub loogu heystey duleedka magaalada Boosaaso mudo labo maalmood ah, sida uu ToggaHerer u xaqiijiyey daqiiqado ka hor masuul ka tirsan maamulka degmada Galgala.
Ninka ajnabiga oo dhalashadiisu ahayd dalka Pakistan waxaa laga afduubtey shaley degaanka Laag oo qiyaastii 30km u jirta magaalada Boossaso xilli uu magaalada Boosaaso ka ambabaxay ninkaasi.
Lama oga siideyntiisa sida ay ku timid waxaase illaa shaley jirey dadaalo ay wadeen masuuliyiin iyo waxgarad oo ku saabsan siideynta ninkan oo wararka qaar ay sheegayeen inuu ka tirsanaa hay’ada macdan baadhista ee ka hawlgasha degaano ka tirsan gobolka Bari.
Wariye ToggaHerer ah oo Telefoon Kula xidhiidhay Gudoomiyaha degmada Galgala ayaa noo sheegey in ninka Pakistaniga ah hadda loo soo qaadey dhinaca magaalada Boosaaso halkasi oo maamulka lagu soo wareejin doono.
Wariye :Baashe Maxamed Yusuf
warqabadka TogaHerer Boosaso